2 Korintofo 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 12:1-21
Anisoadehu a Paul nyae (1-7a)
Paul ‘honam mu nsɔe’ (7b-10)
Asomafo ahotefo no nkyɛn Paul (11-13)
Ná Korintofo no asɛm hia Paul (14-21)
12 Ɛsɛ sɛ mehoahoa me ho. Mfaso nni so, nanso merebɛka anisoadehu+ ne oyikyerɛ a efi Awurade hɔ+ ho asɛm. 2 Minim onipa bi wɔ Kristo mu a mfe 14 ni wohwim no kɔɔ ɔsoro a ɛto so abiɛsa. Sɛ ɛyɛ ɔhonam mu oo, sɛ ɛnyɛ ɔhonam mu oo, minnim; Onyankopɔn na onim. 3 Yiw, minim saa onipa no. Sɛ ɛyɛ ɔhonam mu oo, sɛ ɛnyɛ ɔhonam oo, minnim; Onyankopɔn na onim. 4 Wohwim no kɔɔ paradise, na ɔtee nsɛm a wontumi nka, a mmara mma kwan sɛ onipa bɛka. 5 Onipa a ɔte saa na mede no bɛhoahoa me ho, na m’ankasa de, merenhoahoa me ho, gye me mmerɛwyɛ na mede bɛhoahoa me ho. 6 Na sɛ mepɛ sɛ mehoahoa me ho mpo a, ɛno nkyerɛ sɛ minni adwene, efisɛ nea mɛka no yɛ nokware. Nanso merenhoahoa me ho, na amma obi ammu me ankyɛn nea ohu wɔ me ho anaa nea ɔte fi me hɔ 7 esiane oyikyerɛ a ɛyɛ nwonwa a minya nti. Nea ɛbɛyɛ a meremma me ho so mmoro so nti, wɔama me ɔhonam mu nsɔe,+ Satan bɔfo, sɛ ɔnkɔ so mpaapae m’asom* na mamma me ho so ammoro so. 8 Mesrɛɛ Awurade mprɛnsa wɔ ho, sɛ emfi me so. 9 Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ: “M’adom dɔɔso ma wo, efisɛ mmerɛwyɛ mu na me tumi wie pɛyɛ.”*+ Enti mede anigye kɛse bɛhoahoa me ho wɔ me mmerɛwyɛ ho mmom, sɛnea ɛbɛyɛ a Kristo ahoɔden bɛtena me so sɛ ntamadan. 10 Ɛno nti, mmerɛwyɛ ne adapaatwa ne ohia ne tan a nkurɔfo tan m’ani ne ahokyere a Kristo nti mihyia no yɛ anigyesɛm ma me. Efisɛ meyɛ mmerɛw a, ɛno mmom na minya ahoɔden.+ 11 Mayɛ obi a onni adwene. Mo na moama mayɛ saa, efisɛ ɛsɛ sɛ anka mokamfo me. Na sɛ mensɛ hwee mpo a, wɔn a mokyerɛ sɛ wɔyɛ asomafo ahotefo no, biribiara nni hɔ a wɔde kyɛn me.+ 12 Mo ara muhuu nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ meyɛ ɔsomafo no. Muhuu animia kɛse+ ne nsɛnkyerɛnne ne anwonwade ne ahoɔden nnwuma*+ no. 13 Ɛyɛɛ dɛn na asafo ahorow no nyaa hokwan bi a mo de moannya bi? Ɛno ara ne sɛ, manyɛ adesoa amma mo.+ Mesrɛ mo, momfa mfomso yi nkyɛ me. 14 Hwɛ! Eyi ne ne mprɛnsa so a mayɛ krado sɛ mereba mo nkyɛn, na merenyɛ mo so adesoa. Na ɛnyɛ mo ahode na merehwehwɛ,+ na mmom mo na merehwehwɛ mo. Efisɛ ɛnyɛ mma+ na ɛsɛ sɛ wɔpɛ ade gu hɔ ma wɔn awofo, na mmom awofo na ɛsɛ sɛ wɔpɛ ade gu hɔ ma wɔn mma. 15 Na me de, mede anigye kɛse de nea mewɔ nyinaa bɛma, na mede me ho ama mo* korakora.+ Sɛnea medɔ mo boro so yi, ɛnsɛ sɛ mo nso modɔ me saa ara bi anaa? 16 Ne nyinaa mu no, manyɛ mo so adesoa.+ Nanso moka sɛ mede “nyansakwan” ne “nnɛɛdɛɛ” na enyaa mo. 17 Wɔn a mesomaa wɔn mo nkyɛn no, menam wɔn mu bi so didii mo ho anaa? 18 Mesrɛɛ Tito, na mesomaa onua no kaa ne ho. Tito didii mo ho anaa? Daabida.+ Ɛnyɛ honhom koro no ara mu na yɛnantewee? Ɛnyɛ anammɔn koro no ara na yetui? 19 Saa bere yi nyinaa, na mo adwene yɛ mo sɛ yɛreyi yɛn ano akyerɛ mo anaa? Onyankopɔn anim na yɛkasa wɔ Kristo mu. Nanso adɔfo, hyɛ a yɛpɛ sɛ yɛhyɛ mo den nti na yɛyɛ biribiara. 20 Na misuro sɛ, sɛ meba a, ebia meremmɛto mo sɛnea mepɛ, na me nso, morenhu me sɛnea mopɛ. Mmom anhwɛ a nea mɛba abɛto so ne mansotwe, ahoɔyaw, abufuw, twe-ma-mentwe, anoɔyaw, huhuhuhu,* ahomaso, ne sakasaka. 21 Ebia mesan ba mo nkyɛn a, me Nyankopɔn bɛbrɛ me ase wɔ mo anim. Na wɔn a wɔyɛɛ bɔne a wɔnsakraa wɔn adwene wɔ wɔn bra fĩ,* ne wɔn aguamammɔ,* ne wɔn ahohwisɛm* ho no, ebia medi wɔn mu pii ho awerɛhow.
^ Anaa “mmobɔ me.”
^ Anaa “di mu.”
^ Anaa “nseku; nkɔnkɔnsa.”
2 Korintofo 12